Kenya oo xirtay xudduud ay la wadaagto Soomaaliya ee Lamu iyo Sababta ay Xidhey – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kenya oo xirtay xudduud ay la wadaagto Soomaaliya ee Lamu iyo Sababta...
Kenya oo xirtay xudduud ay la wadaagto Soomaaliya ee Lamu iyo Sababta ay Xidhey
Kenya ayaa xirtay xudduudeeda ay la wadaagto Soomaaliya ee Lamu si aan kala sooc lahayn iyada oo howlgallada ammaan ee ka dhanka ah al-Shabaab ay sii kordhayaan.
Taliyaha Bilayska Gobolka Lamu Mr Muchangi Kioi ayaa sheegay in xuduudku uu kaliya u furan yahay saraakiisha ammaanka.
Waddanka ayaa sidoo kale ka mamnuucay dadka deggan tuulooyinka xuduudaha ka ganacsiga alaabaha somalia laga keeno.
Mr Kioi ayaa sheegay in kuwa ka soo horjeeda dardaaranka uu lumin doono ogolaanshaha ruqsada ganacsiga.
Xiritaanka xuduudka ayaa imanaya toddobaad ka dib markii kaluumeystada kenyan ah laga mamnuucey Xeebta u dhow xudduudda Soomaaliya.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in ganacsi sharci darro ah oo ay ku jiraan alaab been abuur ah iyo ka ganacsiga dadka iyo daroogada oo kor u kacay gobolka.
Taliyaha bilayska ee gobalka ayaa sheegay in askartu ay ilaalinayeen magaalooyinka Ishakani, Kiunga, iyo Raas Kaamboni
saameynta xayiraadda ayay ku qabteen 10 kiish oo sonkor ah iyo dhowr kartoon oo caano ah.
“Waxaan durbaba soo qabannay ugu yaraan 10 kiish oo ah sonkorta sharci darrada ah oo asalkeed hore laga keeney Brazil. Waxay ka soo iibsadeen Soomaaliya dadka deggan Kiunga. Waxaan rabaa in aan caddeeyo in ay tahay dambi ah in ay ku lug yeeshaan qaab kasta oo ganacsi xudduudaha ka socda iyo alaab kasta Soomaaliya ka timaada.
Marka laga reebo cabashooyinka ammaanka, waxaan sidoo kale ka warqabnaa ka ganacsiga dadka iyo nacaybka. Taasi waa inay istaagto. Hadda waa denbi oo kuwa aan garanayn, xuduudka ayaa weli xiran ilaa ogeysiis dheeri ah, “ayuu yiri Mr Kioi.
Maamulaha bilayska ayaa sidoo kale uga digay milkiilayaasha dukaanka iibinaya badeecadaha ka yimaada Soomaaliya ama kuwa ka soo iibsada alaabta Kenya iyo Soomaaliya.
“Kuwani waxay ka soo horjeesanayaan alaabooyinka ka yimaada Kenya ee ku soo galaya Soomaaliya iyo kuwa kale waxay noqonayaan kuwo eedeynaya. Waxaynu burburin doonaa alaabtan oo aan xireynaa dukaanka ama ganacsigiisa . Waxaan sidoo kale ku xidheynaa oo , “ayuu yiri Mr Kioi.
Dhibaatada ka jirta xudduuda Lamu-Soomaaliya ayaa bilowday 2011-kii markii Al-Shabaab ka soo galeen Soomaaliya ay afduubeen kaluumeysato iyo dalxiisayaal.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay Kalabeyr
Next articleDaawo:Xeer Ilaalinta Somaliland oo Soo bandhigtay Eedaha Loo Haysto C/maalik Coldoon
40 Soomaali ah oo yurub ugu dhintay COVID-19